पीडामा प्रियंका - मनोरञ्जन - नेपाल
एकै दिन दुई फिल्म रिलिज हुनु अनि दुवै फिल्मबाट सुखद प्रतिक्रिया नपाउनु, कति पीडादायी होला ? यस्तै तनावमा छिन्, हिरोइन प्रियंका कार्की । १४ वैशाखमा उनी अभिनीत कोहलपुर एक्सप्रेस र ह्याप्पी डेज प्रदर्शन भए । कोहलपुर एक्सप्रेसलाई चोरीको बात लाग्यो भने ह्याप्पी डेजलाई सुरुआतबाटै दर्शकको खडेरी । प्रभावकारी प्रमोसन नगरेको प्रत्यक्ष असर बक्स अफिसमा देखापर्‍यो । न त फिल्मले सकारात्मक समीक्षा नै पायो । धन्न ! कोहलपुर एक्सप्रेसमा उनको अभिनयले प्रशंसा पायो । यसले हल्कै सही, राहत दिलायो उनलाई ।